Mpivarotra lamba ‘kanga’ mampiavaka an’i Zanzibar nandritra ny 30 taona nasaina niala eny amoron’ny arabe · Global Voices teny Malagasy
Voarary tanteraka ao amin'ny kolontsaina amorontsiraka Swahili ny fanaovan-damba Kanga
Voadika ny 19 Septambra 2019 14:21 GMT
Mohammed Abdallah Moody mivarotra kanga, lamba nentim-paharazana, eny an-tsenan'i Darajani, Stone Town, Zanzibar. Saripikan'i Amanda Leigh Lichtenstein, nahazoana alalana.
Isan'andro ao Zanzibar, mankao Stone Town, renivohitra manan-tantara ny vehivavy sy ny lehilahy manerana ny nosy mba hividy kanga — lamba maroloko sy miravaka amidy tsiroaroa miaraka amin'ny hafatra amin'ny teny Swahili.
Tamin'ny volana Aogositra, tezitra ireo mpanjifa kanga raha nahita fa nofoanan'ny manampahefanan'i Stone Town ny toeram-pivarotana kanga ao an-tsenan'i Darajani. Mpivarotra kanga mavitrika 25 farafahakeliny – miaraka amin'ny toeram-pivarotana efa ho 30 taona – no noterena hiala, nanajanona tampoka ny fiharian'izy ireo eny amoron-dalana.
Voarary tanteraka ao amin'ny kolontsaina amorontsiraka Swahili ny kanga — mila mahay fomba fiteny misy lanjany sy filôzôfy ny mpivarotra kangas ao an-tsenan'i Darajani. Nahoana? Atakalo eo amin'ireo namana, fianakaviana sy mpifankatia ny kanga mba hifandraisana sy hanehoana “fomba fiteny” misemo na Swahili izay indraindray sarotra na fady; manana traikefa amin'ny fifantenana izay tena izy mifanaraka amin'ny filàna na zava-misy ireo mpivarotra kanga. Nanao tsianjerin-kafatra Swahili an-jatony ireo mpivarotra kanga ary afaka manavaka tsara ny kanga amin'ny ravaka sy ny hafatra ao aminy.
Kanga maroloko eny an-tsena. Sary avy amin'i Pernille Bærendtsen,, nahazoana alalana.
Araka ny filazan'ilay mpivarotra kanga ela nihetezana, Mohammed Abdallah Moody, nahazo taratasy avy amin'ny Fahefana Misahana ny Fikajiana sy ny Fampandrosoana an'i Stone Town ireo mpivarotra kanga manamorona ny Lalana Chavda-Mkunazini, fantatra amin'ny hoe “tsenan'ny kanga” tamin'ny 26 Jolay 2019, taratasy manazava fa manana roa andro ireo mpivarotra kanga hanala ny fivarotan'izy ireo ary miala eo.
Matetika miaraka amin'ny hafatra amin'ny teny Swahili ny Kanga ary atakalo mba hanehoana fihetseham-po. Hoy ity hafatra ity hoe “Mimi si mgomvi wako” na “Tsy fahavalonao aho”.
Milaza i Moody fa tsy nanan-tsafidy afa-tsy ny mandeha miafina ireo mpivarotra sasany ary mivarotra ny kanga amin'ny alalan'ny fivarotana hafa no sady mandamina ny antsipirihany amin'ireo manampahefana. Rehefa tratra mivarotra kanga eny an-dalambe, dia mety hiatrika onitra hatramin'ny 500.000 shillings Tanzaniana (eo amin'ny 250 dolara Amerikana) hatramin'ny enim-bolana an-tranomaizina izy ireo.
Taratasy avy amin'ny fahefana misahana ny fikajiana sy ny fampandrosoana an'i Stone Town milaza fa manana roa andro ry zareo hialana. Saripikan'i Amanda Leigh Lichtenstein, nahazoana alalana.
Milaza ny taratasy fa nangatahana ireo mpivarotra kanga mba hiala noho ny “toeran'izy ireo tsy nahazoana alalana hanaovana fihariana tsy ara-dalàna eny amin'ny rindrina, vavahady ary ny filankevitra anatiny ao amin'ny faritr'i [Stone Town].”
Ary mitohy hoe:
Nitarika ny fahasimban'ny rindrindra izany noho ny fandavahana azy mba hanantonana entana, manelingelina ny lalana sy ny endriky ny varavarana orizinalin'ny Stone Town. Ary koa mampihena ny lanjany tany am-boalohany
Nanazava i Moody fa mandoa vola 2000 Tanzaniana shillings (.90 dolara Amerikana) isan'andro na eo ho eo amin'ny 60 000 TZS isam-bolana (29 dolara Amerikana) any amin'ny lapan'ny tanàna izy ireo mba hampandehanana ny trano heva ankalamanjana fivarotana kanga. Nilaza izy fa nanana fahazoan-dàlana izy ireo mandra-pijanon'ny STCDA tamin'ny taona 2015.
Nilaza i Said Juma Khamis, mpivarotra kanga iray hafa, fa tamin'ny taona 2016, nanangana fikambanana ofisialy antsoina hoe “Mpivarotra Kanga ao Chavda” ny vondron'izy ireo ahitana mpivarotra kanga 30 mba hiaro ny zon'izy ireo hivarotra ny entany ary hanamafy orina ny fihariany amin'ny mahakoperativa. Hoy izy:
Very mpanjifa betsaka izahay nanomboka tamin'izahay nasaina niala teto. Mbola betsaka noho izany. Nahare ny sasany fa tsy afaka mivarotra kanga intsony izahay. Ny hafa mbola tonga eto, manantena anay hivarotra kanga. Tena manahirana izany.
Fiarovana ny vakoka ara-kolontsaina — misanda hatraiza?
Tamin'ny taona 2001, nanendry ny tanàna tranainy manan-tantara Stone Town ho toerana Vakoka Iraisampirenena ny UNESCO, manandratra azy hitovy sata amin'ny piramidan'i Ejipta, na Taj Mahal any India. Nilaza i Amina Ahmada, miaraka amin'ny Zanzibar Stone Town Heritage Society, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana fa nandalo andiam-panovana nandritra ny taona vitsy lasa ny tanàna tamin'ny ezaka manerana ny nosy mba hanamafisana ny fiarovana ny lova ara-kolontsaina - miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'i Stone Town, toerana fihaonan-dalan'ny fizahan-tany:
Miara-miasa amin'ny fokonolona izahay mba hanampy azy ireo hahatakatra ny lanjan'ny lova iraisan'izy ireo. Miaina anaty tranobe tranainy sarobidy tokoa ny sasany amin'ireo mponina ao [Stone Town] ary tsy mahalala ny lanjany ara-tantara.
Amin'ny fanamafisana mafy ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fiarovana ireo toerana sy maritrano manan-tantara, dia nandray fepetra hanasazy izay heveriny fa fihariana tsy ara-dalàna manakantsakana ny fidirana mazava amin'ny hakanton'ny maritrano tsy manam-paharoa sy ny lova ara-kolontsaina ao amin'ny Tanàna Taloha.ny fiadidiana ny tanàna
Tamin'ny taona 1830, namindra ny sezam-pahefany avy ao Muscat ho any Stone Town ny mpanjaka tany Oman ary nanjaka tao amin'ny faritra mandra-pahatongan'ny taona 1963, nanara-maso ny varotra fidiram-bola amin'ny jirofo izay novelomin'ny asam-panandevozana amin'ny ankapobeny.
Araka ny filazan'ny UNESCO, arovan'ny Lalàna 2002 momba ny Fiarovana ny Tsangambato Fahiny ny maritranon'i Stone Town – fitambaran'ny firafitra Arabo, Indiana ary Afrikanina izay taratry ny fifanakalozana ara-barotra Ranomasimbe Indiana teo amin'ny Hoala, India sy ny morontsiraka Swahili. Tamin'ny taona 1985, natsangana ny STCDA ary avy eo namoaka ny Lalàna 1994 mifehy ny fikajiana sy fampandrosoana an'i Stone Town, izay nitarika tamin'ny famolavolana drafitra lehibe mba “hikolokoloana, hitehirizana ary hampandrosoana ny lanjan'i” Stone Town. Manaraka ny lalànan'ny Fahefan'ny Fiarovana sy ny fampandrosoana ny Stone Town ny STCDA ankehitriny, izay manome torolàlana momba ny fanarahan-dalàna, ny fanafoanana ny fampanofàna, ny fampiharana ny lalàna sy olana lehibe hafa.
Ny zoma 23 aogositra, namoaka taratasy ho an'ireo mpivarotra tapakila sambo ao amin'ny faritr'i Malindi ny manampahefana ary nilaza tamin'izy ireo fa “tsy ara-dalàna sy” maloto “ny fivarotan'izy ireo. Tamin'ny alatsinainy, fihariana maro no noravàna. Nilaza i Mwanjabu Mohamad, mpivarotra tapakila fa tany an-trano izy rehefa nahazo antso fa voakasika ny biraony, araka ny fijoroany vavolombelona tao amin'ny KTV-TV.
Nilaza i Ahmada fa feno tranoben'ny taonjato faha-18 sy taonjato faha-19 i Stone Town, ary olon-tsotra no monina sy tompon'ny sasany amin'izany, izay tsy mahalala ny lanjany ara-tantara. Ny tranobe misy ny sata “wakf”, araka ny lalàna silamo, dia fananana fanaovana asa soa ara-panahy izay tsy azo havaozina na ovaina raha tsy manaraka ny lalàna nampidirin'ny Zanzibar Waqf and Trust Commission, niaraka tamin'ny STCDA, ao anatin'izany ireo tranom-pianakaviana tsy miankina.
Tsy azo amidy, vidiana na lovaina hahazoana tombony ny tranobe misy ny sata Wakf. Tsy maintsy manaraka ny torolàlana hentitra avy amin'ny manampahefanan'i Stone Town ny fanamboarana na ny fanavaozana rehetra. Saripikan'i Amanda Leigh Lichtenstein, nahazoana alalana.
Manizingizina i Moody, mpivarotra kanga fa tsy misy tranobe na dia iray aza manana sata Wakf ao amin'ny tsenan'ny kanga aza, araka ny fahalalany, ary manana ny fankatoavan'izy ireo ihany koa ireo tranoben'ny olon-tsotra eo anoloan'ny toerana nametrahan'izy ireo ny fivarotana an-tsisin-dalana efa ho 30 taona izay. Hoy i Moody:
Noana izahay. Mila misakafo izahay. Manana fianakaviana velomina izahay. Noho izany, voatery niverina [fivarotana] tsikelikely izahay.
Nilaza izy fa nanoratra taratasy ho an'ny STCDA ny koperativa, mangataka fihaonana hiresahana momba ny toe-javatra iainan'izy ireo mba hahafahan'ny kolontsaina kanga hiroborobo hatrany.
Ny fanantenana dia hankatoa ireo mpivarotra kanga ho endrika lehibe amin'ny vakoka sy kolontsaina Swahili ny manampahefanan'i Stone Town ary hitady vahaolana hahasoa ny rehetra.
Kanga miaha amin'ny tady. Sary avy amin'i Pernille Bærendtsen, nahazoana alalana.